Ajụjụ - Ngwa igwe igwe
Q1: Kedu ihe bụ isi ngwaahịa na akụrụngwa gị?
A: Ngwa anyị bụ isi nkenke CNC Machining akụkụ (Carbon Steel, Alloy Steel, Aluminom alloy, steel steel, Brass, Copper, Titanium alloy ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ahaziri), akụkụ mpempe akwụkwọ, akụkụ stamping, yana akụkụ ịkpụzi ntụtụ.
Q2: Ị nwere ikike zuru oke?
A: Ngwa mmepụta anyị dị oke mma. Anyị nwere otu ndị ọrụ nwere nka bụ ndị na -arụ ọrụ ihe karịrị afọ iri. Ahụmịhe mmepụta ha na teknụzụ ha bara ọgaranya nke ukwuu. Anyị nwere ego zuru oke iji hụ na ụlọ ọrụ na -arụ ọrụ nke ọma.
Q3: Kedu ụdị ọrụ ị ga -enye?
A: Ebumnuche mbụ nke ụlọ ọrụ anyị bụ idozi nsogbu niile maka ndị ahịa anyị niile. N'ihi ya, ọbụlagodi na anyị enweghị ike imezu ụfọdụ ihe ị chọrọ, anyị ga -akpọtụrụ ụlọ ọrụ na -arụkọ ọrụ ọnụ anyị, ndị nwere ike imezu ihe ị chọrọ, jiri ọnụ ahịa ezi uche na ịdị mma dị elu.
Q4: Kedu mgbe m nwere ike nweta ọnụahịa ahụ? Enwere m ike nweta mbelata ego?
A1: N'ikwu okwu n'ozuzu, anyị na -enye gị nkwupụta gọọmentị n'ime awa 24, onyinye pụrụ iche ahaziri ma ọ bụ nke emebere abụghị ihe karịrị awa 72. Okwu ọ bụla dị mkpa, biko kpọtụrụ anyị ozugbo site na ekwentị ma ọ bụ zitere anyị email.
A2: Ee, maka usoro imepụta oke, yana ndị ahịa oge niile, anyị na -enye ego dị ala.
Q5: Kedu ihe ị ga -eme ma ọ bụrụ na ngwongwo mebiri emebi n'oge njem?
A: Iji zere nsogbu ọ bụla na -esote gbasara okwu dị mma, anyị na -atụ aro ka ị lelee ngwongwo ozugbo ị nwetara ha. Ọ bụrụ na enwere mbupu ụgbọ ala mebiri emebi ma ọ bụ okwu dị mma, biko see foto zuru ezu ma kpọtụrụ anyị ozugbo enwere ike, anyị ga -edozi ya nke ọma iji hụ na mfu gị belatara ntakịrị.
Q6: Enwere m ike itinye Logo m na ngwaahịa?
A: Ee, maka akụkụ igwe, anyị nwere ike iji ịcha Laser ma ọ bụ ịde ihe iji tinye akara ngosi gị na ya; Maka akụkụ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, akụkụ na -ejikọ ọnụ na akụkụ plastik, biko zitere anyị akara ngosi na anyị ga -eji ya akpụ akpụ.
Q7: Ọ ga -ekwe omume ịmara ka ngwaahịa m si aga na -agaghị ụlọ ọrụ gị?
A: Anyị ga -enye usoro nhazi oge zuru ezu wee ziga mkpesa kwa izu na foto, nke na -egosi gị usoro nhazi igwe zuru ezu. Ka ọ dị ugbu a, anyị ga -enye QC Report maka ụdị ngwaahịa ọ bụla tupu nnyefe.
Q8: Ọ bụrụ na imepụta ngwaahịa adịghị mma, ị ga -akwụghachite anyị?
A: N'ezie, anyị agaghị ewere ohere mepụta ngwaahịa adịghị mma. N'ikwu okwu n'ozuzu, anyị ga -emepụta ngwaahịa dị mma ruo mgbe ị ga -enwe afọ ojuju.
Igbe galvanized, Igwe eji arụ ọrụ titanium, Akụkụ Ngwa CNC, High-End mpempe akwụkwọ Metal Parts ngwaahia, Akara akpaghị aka, Omenala igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ,